AMALUNGU ayaqalisa - Sikunye
AMALUNGU ayaqalisaIvo Kittel2021-03-09T00:20:11+02:00
Wena, usebenza nebandla lakho, ungasebenza ukuba udale iindawo yoluntu apho abantwana bekhula ngempumelelo ukuba babe yilento uThixo abadalele ukuba babe yiyo ebomini.
Dlala Ixaxheba Yakho Ebandleni Lakho
Ingenzeka ukuba unalo ulwazi malunga nephulo lweeNtsuku eziliWaka zokuQala, okanye kungona uqala ukuva. Siyakholwa ukuba usendaweni ebalulekileyo enokunceda ukwazi ukuxhasa nokuqinisa iintsapho. Hlola lamanyathela angezantsi ukukunceda ukuba uqalise:
Khuthazeka malunga nendlela ibandla lakho elinokuthi linike abantwana abancinci ithuba elomeleleyo lokuqala ubomi. Ukuba awukakwenzi oku, sicinga ukuba lithuba elihle eli ukuba uqale ngokuya kumsitho wethu obanjwa kwiqonga le-intanethi obizwa ngokuthi ‘Ibandla kunye nobomi obuselula nokuthi uhlole nzulu lombono mkhulu kananjalo kuthethwa ukuthini ukuba nguthandi wephulo leeNtsuku eziliWaka zokuQala.
Thetha neNtshatsheli yakho. Ukuba ibandla lakho sele liyinxalenye yephulo leeNtsuku eziliWaka zokuQala, kufanele ukuba sele ekhona umntu otyunjelwe ukukhokhela eliphulo lokunceda iintsapho.
Thetha nenkokheli yakho yebandla. Ukuba ibandla lakho alikazibandakanyi nephulo lokukhonza iintsapho kwiiNtsuku eziliWaka zokuQala, khuthaza iinkokheli yebandla lakho ukuba yenze njalo ngokuthi izibandakanye kumsitho wethu obanjwa kwiqonga le-intanethi obizwa ngokuti ‘Ibandla kunye nobomi obuselula.
Qalisa ukuxhasa iintsapho. Zininzi kakhulu izinto onokuzenza ukuxhasa nokuqinisa iintsapho. Funda izixhobo nencwadi zethu zolwazi malunga nokukhathalela iintsapho kunye nendlela onokudlala ngayo inxanxheba ekuhlaleni.
Zixhobise. I-Sikunye inikezela ngethuba loqeqesho lokuba unike inkxaso ethile kusapho oluthile. Jonga ukuba uyafuna na ukuba ngumntu ondwendwela amakhaya okanye umhlanganisi onothando’ okanye uMququzeleli wemisitho ephambi okanye esemva kokuba omama bebelekile, phulo elo eliqhutywa ne Flourish.
Hlala uqhagamshelene kananjalo uxhaswa ngokuthi uye kwimisitho yenkxaso efumaneka kwiqonga lwe-intanethi okanye iintlangano ze Sikunye. Zigcine usazi ngokuthi usayine ufumane imbalwelwano yethu rhoqo, nokusilandela kumaqonga onxibelelwano kawonkewonke, kananjalo ufunde ngamabali enguqu aphuma kumabandla ohlukeneyo aphuma kulo lonke eli loMzantsi Africa.